Gaas oo Garoowe Kusoo Xidhay Shirweynaha Kalluumaysiga Soomaaliya. | allsanaag
Gaas oo Garoowe Kusoo Xidhay Shirweynaha Kalluumaysiga Soomaaliya.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 26 October 2017 Garoowe kusoo xidhay shirweynaha kalluumaysiga Soomaaliya oo 24 -26 bishan October 2017 ka soconayey Garoowe ee caasimadda dawladda Puntland.
Shirweynahan oo ay kasoo qayb galen Masuuliyiin ka kalayimi DFS iyo dawladdaha xubnaha ka ah DFS iyo ganacsatada reer Puntland ayaa waxaa Madaxweynaha ku wehelinaayey xidhitaankan shirkani Wasiirka Wasaaradda Kalluumaysiga Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi iyo masuuliyiinta Wasaaraddaasi, masuuliyiin ka tirsan goleyaasha dawladda Puntland, saraakiil ka tirsan Madaxtooyada dawladda Puntland iyo hay’addaha shaqo wadaaga la ah Wasaaradda Kalluumaysiga.
Madaxweynaha dawladda Puntland ayaa ugu horayn soo dhoweeyey wufuudda ka kala yimid dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo dawladdaha xubnaha ka ah dawladda Fadaraalka Soomaaliy, kuwaas oo ka qayb galay shirkani, waxaana uu Madaxweynuhu tilaamay in khayraadka maanta Soomaaliya laysku haylaynkaraa yahay Kalluumaysiga.
Sidoo kale Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa sheegay kalluumaysiga sharci darada ah ee Soomaaliya waddamada shisheeye ku xaalufiyaan baddeeda uu yahay masiibo qaran ayna dawladda Puntland sidaasi ku timaantay June 2014, Madaxweynaha ayaa xusay in laban-laab ka badan tahay faa’iidada ay ka helaan jiriifayaashu badda Soomaaliya macaawimada beesha caalamku ugu deeqaan Soomaaliya.
Dhinaca kale Madaxweyna ayaa sheegay in ay lamid tahay ama ka xuntahay jariifkaasi tan shacabka Soomaaliyeed qaarkood sameeyaan taas oo ah in ay dhoofiyaan argoosato tarmaysa oo sidda hal milyan oo ukun ah, waxaana uu Madaxweynuhu ku booriyey kalluumaysatada iyo shacabka Soomaliyeed in la illaaliyo oo la daryeelo argoosatada iyo waxyaalaha kale ee manfacale ee ku jira badda.
Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Kalluumaysiga Soomaaliya iyo khayraadka Badda ayaa dhankiisa sheegay in DFS ku heelan tahay sidii ay wax uga qaban lahayd jariifka sharci darada ah ee ka jira guud ahaan badaha Soomaaliya, isla markaana waxa uu tilmaamay in loo bahan yahay in meel looga soo wad- jeesto joojinta jariifkaasi.
Ugu danbayn, Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa kula dardaarmay shacabka Soomaaliyeed inay la jaanqaadan adduunyada horumartey, isla mar’ahaantaana ay ka faa’iidaystaan khayraadkooda badda iyo kan farsamoba ee ay ku horumari karaan dalkooda iyo ganacsigoodaba.
← Madaxweynaha Puntland oo Sagootiyey Guddoonka Labada Aqal Ee Baarlamaanka DFS iyo Wufuudda Wehelisey. Dacaayadda Raqiiska ah ee SNM →